Melania Trump Oo booqasho ku joogta dalka Kenya |
Melania Trump Oo booqasho ku joogta dalka Kenya
Jicmo, October, 05, 2018 (GNN) – Marwada koobaad ee waddanka Mareykanka, Melania Trump, ayaa waxa ay dalka Kenya ku soo gaartay booqashadii ay ku maraysay afarta dal ee Afrikaanka ah.
Booqashadeeda Kenya ayaa la filayaa in ay diiradda ku saari doonto arrimaha la xiriira dhaqanka iyo ilaalinta duurjoogta.
Waxaa la xiray qeybta ka mid ah elaboorka caalamiga ah Jomo Kenyatta markii ay soo caga dhiganaysay diyaaraddii sidday Melania Trump. Waxa ayna maamulku qorsheeynayaan in marka ay dalka ka baxayso ay sidaa si lamid ah sameeyaan.
Inta ay joogto dalka Kenya waxa ay booqan doontaa xarumaha ugu caansan ee lagu dhaqaaleeyo duurjoogta, sidoo kalana waxa ay daawan doontaa ruwaayad lagu soo bandhigaya Tiyaatarka Qaranka ee Kenya.
Dhanka kale Melania Trump ayaa markii labaad la kulmi doonta dhigeeda marwada koobaad ee dalka Kenya. Waxa ayna Margaret Kenyatta ku amaantay ololeheeda ay ugu magacdartay “Beyond Zero” kaas oo lagu hormarinayo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka.
Marwada u dhaxda Donald Trump ayaa iyadana la imanaysa ololeheeda loogu magacdaray ”Be Best” kaas oo lagu doonayo in lagu hormariyo nolosha caruurta.
Ilaa iyo haatan qaaradda Africa si diiran ayaa loogu soo dhaweeyay balse hadalladii adkaa ee uu Africa seeygeeda Trump u adeegsaday bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay ayaa dadaaladeeda mugdi galinaya.